No. 2152, Thursday, June 13, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2152, Thursday, June 13, 2019
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၁ ရက် (ကြာသပတေး၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၉)
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော် ကျန်းမာရေးမကောင်းဟု ဦးဝင်းထိန်ပြော
အဂတိလိုက်စားမှု ကြောင့် ထားဝယ်အကျဉ်းထောင် အတွင်း ထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် တနင်္သာရီတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဟောင်းဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ရာ ကျန်း မာရေးမကောင်းကြောင်း တွေ့ရ သည်ဟု ဒီချုပ်ဗဟိုသဘာပတိအ ဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်က 7Day Daily သတင်းစာအား ယမန်
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် ၄ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အရက်သောက်သုံးနေ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသက် (၁၃) နှစ်မှ (၁၇) နှစ် ကြား ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် ၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် အ ရက်သောက်သုံးနေပြီး ၎င်းတို့အ နက် ထက်ဝက်ခန့်သည် အသက် (၁၄) နှစ်ရွယ်ကပင် အရက်စတင် သောက်သုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင် ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
လ၀က၀န်ထမ်းခုနစ်ဦးကို အဂတိတိုက်ဖျက်မှုဖြင့် အမှုဖွင့်
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်စု ဇယားပြုလုပ်ခြင်းနှင့် မွေးတိုးစာ ရင်းပြုလုပ်ခြင်းတို့တွင် ငွေကြေး တောင်းခံသော လားရှိုးမြို့နယ် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင် အားဆိုင်ရာ ဦးစီးမှူးအပါအ၀င် ဝန်ထမ်းခုနစ် ဦးနှင့် ပူး
အင်းလျားကန်ပေါင်တွင် လက်ပစ်ဗုံးနှင့်ပုံစံတူ မီးခြစ်တွေ့၍ အလုပ်ရှုပ်
ရန်ကုန်မြို့ အင်းလျား ကန်ပေါင်တွင် လက်ပစ်ဗုံးနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်တူပြုလုပ်ထားသော ဂက်စ်မီးခြစ်တစ်လုံး တွေ့ရှိမှု ကြောင့် ဗုံးလန့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်အပါအဝင် ဒေသအချို့ ၁၀ ရက်ခန့် လျှပ်စစ်မီး ယာယီပြတ်တောက်မည်
မိုးနည်းနေသောကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကြီးအချို့ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု ထက်ဝက်ကျော် လျော့ကျခြင်းကြောင့် စက်ရုံအချို့ ရပ်တန့်ထားရသဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အပါအဝင် ဒေသအချို့၌ ၁၀ ရက်ခန့် လျှပ်စစ်မီးယာယီပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန
ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ကုန်သည့် ဥရုချောင်း မြေထိန်းနံရံ တစ်လခန့်အကြာတွင်ပြို
ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ခုနစ်မျိုးကို နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအား တင်ပို့ခွင့်ပြု
ဆန်၊ ဆန်ကွဲနှင့် လယ် ယာထွက်ကုန်များ၊ ရေထွက်ကုန် များအပါအ၀င်ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ခုနစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်သူများထံမှ တစ်ဆင့်ဝယ်ယူပြီး ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းကို နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ အားလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်း စီး ပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌ
လွိုင်ကော်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တု ကန့်ကွက်သူခြောက်ဦးကို တရားစွဲထားမှု အမြန်ရုပ်သိမ်းပေးရန် ထုတ်ပြန်
ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ် ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုနှင့် ပြည် နယ်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီး ဦးမော်မော်တို့၏ လုပ်ရပ်အပေါ် အပြင်းအထန်ရှုတ်ချပြီး တရားစွဲခံနေရသည့် လူငယ်ခြောက်ဦးအမှု အမြန်ဆုံး ရုပ်သိမ်းပေးရန် ကယား လီဖုလူ ငယ်ဗဟိုကော်မတီက ယမန်နေ့ တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် သည်။
ဦးဝီရသူ ဘေးကင်းရေး ချီတက်ဆုတောင်းပွဲနှစ်ခုအတွက် သံဃာခြောက်ပါးအပါအဝင် ၁၄ ဦးကို အမှုဖွင့်ထား
ဦးဝီရသူ ဘေးရန်ကင်း စေရေး ချီတက်ဆုတောင်းပွဲများ ပြုလုပ်ရာတွင် ဦးဆောင်သူ သံဃာခြောက်ပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ရှစ်ဦး စုစုပေါင်း ၁၄ ဦးကို ငြိမ်းစု စီပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။
ရေသူမဇာတ်ရုပ်အတွက် အသေအချာပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ အိချောပို
ဒဏ္ဍာရီပင်လယ် ရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား သည့် ရေသူမ ဇာတ်ရုပ်အတွက်အသေအချာ ပြင်ဆင်၍ ရိုက်ကူးခဲ့ကြောင်း အိချောပိုကပြော သည်။
ဒိုင်အသစ်တွေပါဝင်လာတဲ့ Myanmar Idol
မကြာမီ ကျင်းပတော့ မည့် Myanmar Idol Season4တွင် ဒိုင်အဖြစ် အောင်ကိုလတ်၊ တင်ဇာမော်နှင့် ဖြူဖြူကျော်သိန်း တို့က ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး Host အဖြစ် ယခင်နှစ်များအတိုင်း ကျော်ထက်အောင်က ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်သည်။
လာလီဂါက ထွက်ခွာနိုင်ခြေရှိဟု ဂရစ်ဇ်မန်း အရိပ်အမြွက်ပြောကြား
လီဂူးဝမ်းချန်ပီယံ ပီအက်စ် ဂျီနှင့် လာလီဂါချန်ပီယံဘာစီလို နာတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြောဆိုမှုများ ရှိနေစဉ် မိမိအနေဖြင့် လာလီဂါ တွင်ဆက်နေရန် မသေချာဟု ပြင် သစ်တိုက်စစ်မှူး ဂရစ်ဇ်မန်းက ပြောသည်။
ယူ-၂၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ တောင်ကိုရီးယားနှင့် ယူကရိန်း ဗိုလ်လုမည်
ပိုလန်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပနေသော ဖီဖာယူ-၂၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ၌ တောင်ကိုရီးယားက အီကွေဒေါကို ၁-၀ ဂိုးဖြင့် အနိုင် ရရှိပြီး ဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ပတူကောင်အန္တရာယ်ရှိသည့် နေအိမ်ကို မီးသတ်က သွားရောက်ရှင်းလင်း
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း မြို့နယ်ရှိ အိမ်တစ်အိမ်တွင် မိသားစုဝင်များကို ပတူကောင် များက အန္တရာယ်ပေးနေသော ကြောင့် သွားရောက်ရှင်းလင်းပေး ခဲ့ရကြောင်း ဒဂုံမြို့သစ်မြောက် ပိုင်းမြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံး ဦးစီးအရာရှိ ဦးဇော်မင်းဦးကပြောသည်။
တိုးတက်လာသည့် တရုတ်ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဖြေရှင်းရေး မန္တလေးတွင် ဆွေးနွေး
မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရုတ် ခရီးသွားများ ၀င်ရောက်မှု မြင့် တက်လာခြင်းနှင့်အတူ ပြည်တွင်း၌ ၀န်ဆောင်မှုများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် အဆင်မပြေမှုများ ဖြေရှင်းနိုင်ရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲကို မန္တလေးမြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးကို တားမြစ်သည့် မြန်မာစစ်သံမှူး၏လုပ်ရပ် NCA ချိုးဖောက်ရာရောက်ဟု KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြော
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ထိုး ၁၀ ဖွဲ့၏ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ပြုလုပ်မည့် အစည်းအဝေးကို တားမြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာစစ်သံ မှူး၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် NCAကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) အထွေထွေအတွင်းရေး မှူးချုပ် ပဒိုစောတာဒိုမူးက ပြော သည်။
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး နေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်း ဦးခေါင်း သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံး
မန္တလေးခရိုင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး မျိုးညွန့် သန်းသည် ယမန်နေ့က နေအိမ် အိပ်ခန်းအတွင်း ဦးခေါင်း သေ နတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည်။
ဖျာပုံမြို့ ချောင်းတွင်းတံတားပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားသည့် ယာဉ်တိုက်မှုမှ ၁၀ ဘီးယာဉ်မောင်း လာရောက်အဖမ်းခံ
ဖျာပုံမြို့ ချောင်းတွင်းတံ တားပေါ်၌ ဓာတ်တိုင်များတင်၍ ရပ်တန့်ထားသော ၁၀ ဘီးယာဉ်မှ ယာဉ်မောင်း ကိုသန်းဇော်(ခ)ဝဏ္ဏ သည် ဇွန်လ ၁၁ ရက်ညက ဖျာပုံ မြို့မရဲစခန်းသို့ လာရောက်အ ဖမ်းခံကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းရဲ တပ်ဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုရဲမှူး ကြီးထွန်းရွှေကအတည်ပြုသည်။
တရုတ်တွင် လူကုန်ကူးခံရပြီး ပျောက်ဆုံးနေသော အမျိုးသမီးကို ပြန်တွေ့ပြီဟု ဆို
လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ် နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့က ပညာပေးအ နေဖြင့် ဗီဒီယိုဖိုင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးခံရပြီး ရိုက်နှက်ခံနေရသော မြန်မာအ မျိုးသမီးကို ယခု ပြန်ရှာတွေ့ပြီဖြစ် ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၌ အိမ်ထောင်ကျနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကာယကံရှင်၏အိမ်နီးချင်းများက ပြောသည်။
ရန်ကုန်အစိုးရတောင်းသည့်ဘတ်ဂျက် အမတ်များ ကန့်ကွက်
၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် တွင် ခုနစ်ထပ်မြင့်သည့် တိုင်း ရဲဌာနချုပ် ဆောက်လုပ်ရန် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ကျပ်သန်း ၅,၀၀၀တောင်းခံထားခြင်းကို ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်၌ အမတ်များက ကန့် ကွက်ခဲ့သည်။
ပလက်ဝဒေသတွင် တပ်မတော်နှင့် AA တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေတိုးလာ
ချင်းပြည်နယ်ပလက် ၀ဒေသတွင် တပ်မတော်နှင့် ရခိုင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (AA) တိုက်ပွဲ ကြောင့် တိမ်းရှောင်လာသူပိုများ လာပြီး သုံးရက်အတွင်းလူ ၇၀၀ ကျော် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေး လာကြောင်း ပလက်ဝဒေသခံအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက ပြောသည်။
မြန်မာလိဂ်-၂ ဒုတိယအကျော့ပြိုင်ပွဲကို ဇွန်လ ၁၃ နှင့် ၁၄ ရက်တွင် ပြန်လည်စတင်
မြန်မာလိဂ်-၂ ပြည် တွင်း အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဒုတိယအကျော့ရာသီ အဖွင့်ပွဲစဉ် များကို ဇွန်လ ၁၃ ရက် နှင့် ၁၄ ရက်တွင် ပြန်လည်စတင်ကျင်းပ မည်ဖြစ်သည်။
အာရှပိုက်ကျော်ခြင်း ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းငွေတံဆိပ်ရရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပ သည့် အာရှပိုက်ကျော်ခြင်းချန်ပီ ယံရှစ် ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ အမျိုးသမီးအသင်း ဗိုလ်လုပွဲအ ဆင့်သို့ တက်ရောက်သော်လည်း ထိုင်းအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ပြီး ငွေတံ ဆိပ်ဖြင့်သာ ကျေနပ်ခဲ့ရသည်။
မောရစ်သျှနိုင်ငံတကာ ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲတွင် သက်ထားသူဇာဝင်ပြိုင်မည်
မောရစ်သျှနိုင်ငံ၌ကျင်း ပမည့် နိုင်ငံတကာကြက်တောင် ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူ ဇာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ် သည်။
စင်ကာပူကို နိုင်ခြင်းကြောင့် အဓိကပြိုင်ပွဲများအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေကြောင်း မြန်မာနည်းပြဆို
ဖီဖာနိုင်ငံတကာ ခြေ စမ်းပွဲတွင် အိမ်ရှင်စင်ကာပူအ သင်းကို ၂-၁ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရ သဖြင့် အဓိကပြိုင်ပွဲများဖြစ်သည့် ဆူဇူကီးဖလားနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲများအတွက် ကြိုတင်ပြင် ဆင်ရန် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေ ကြောင်း မြန်မာအသင်း နည်းပြ ချုပ်ရာဂျူလိုဗစ်က ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်ရှိ တောင်တက်ယာဉ်များ ဥပဒေနှင့်အညီပြေးဆွဲရန် လွှတ်တော်တွင် ခေါ်ယူညှိနှိုင်း
မွန်ပြည်နယ်ရှိ တောင်တက်ယာဉ်များ ဥပဒေ နှင့်အညီပြေးဆွဲနိုင်ရန် မြို့နယ် တိုင်းရှိ တောင်တက်ယာဉ် အ သင်းများကို မွန်ပြည်နယ်လွှတ် တော်ဥပဒေပြုရေးကော်မတီက ခေါ်ယူညှိနှိုင်းခဲ့သည်။
သက်တမ်း နှစ် (၁၈၀)ခန့်ရှိ ရှေးဟောင်းကျွန်းခုတင်နှင့် သေတ္တာကို ပုဂ္ဂလိကသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုယ်ပိုင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခွင့်ပြု
မန္တလေးမြို့ရှိ မိသားစု တစ်စုက ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သောသက်တမ်း နှစ် (၁၈၀) ခန့်ရှိ ရှေး ဟောင်းကျွန်းခုတင်နှင့် သေတ္တာ ကို တရားဝင်ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရန် ရှေးဟောင်းသုတေ သနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီး ဌာနသို့ လျှောက်ထားရာ ဌာနက ပထမအကြိမ် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
လူမှုကူညီရေးအသင်းယာဉ်ပေါ်မှ တရားမ၀င် သစ်ခွဲသားများဖမ်းမိ
ချောင်းဦးမြို့နယ်၌လမ်း ဘေးရေမြောင်းအတွင်း ထိုးကျ သည့် လူမှုကူညီရေးအသင်း ယာဉ်ပေါ်မှ တရားမ၀င်တမလန်း သစ်ခွဲသားများ ဖမ်းဆီးမိကြောင်း ချောင်းဦးမြို့နယ်သစ်တောဦးစီး ဌာန တောအုပ်ကြီးဦးစိုးထိုက်က ပြောသည်။
မုံရွာတွင် ဆိုင်ကယ်ခိုးသူသုံးဦး ဖမ်းမိ၊ တစ်ဦးထွက်ပြေးနေ
မုံရွာမြို့တွင် GPS တပ် ဆင်ထားသော ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးခိုး ယူသူသုံးဦးကိုဖမ်းမိပြီး တစ်ဦး ထွက်ပြေးနေကြောင်း မုံရွာမြို့ နယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှူး ရဲအုပ် ဆန်းလင်းက ပြောသည်။
ဆိုင်ကယ်တူးဘောက်စ်အတွင်းမှ ဘဏ်ထုတ်ငွေများ ခိုးယူနေသူကို ပြည်သူများက ဖမ်းဆီးပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ အပ်နှံ
ဆိုင်ကယ်တူးဘောက်စ်အ တွင်းမှ ဘဏ်ထုတ်ငွေများ ခိုး ယူနေသူကို ပြည်သူများက ဖမ်း ဆီးပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ထံအပ်နှံသည့်ဖြစ် ရပ် ပြည်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း ပြည်မြို့အမှတ် (၁) ရဲစ ခန်းမှူး ရဲအုပ်အောင်လှိုင်ဝင်းက ပြော သည်။